Indawo yokudla okulula - Abakhiqizi baseChina Abathengisi, abahlinzeki
Inyama Yesithelo Semifino Yasesigodlweni
Amaprotheni aphezulu, Ukudla kwemifino, izisusa zenyama
Okubabayo, okunzima nokuhlafunayo, ucezu ngalunye lumnandi
Ukunambitheka okubabayo okumnandi, imikhiqizo enoshukela omningi
Okubabayo nokuqina ngokwanele, ukukhetha kokuqala kubathandi bokudla okubabayo.
Isigaxa Sikabhontshisi Esibabayo (igama lesiShayina uLatiao noma uLapian), esaziwa nangokuthi i-gluten ebabayo, inyama yenkomo yemifino nokunye, wuhlobo lokudla okulula okwenziwe ngofulawa kakolweni, okunye okusanhlamvu nobhontshisi njengezinto zokusetshenziswa eziyinhloko. Muva nje kuba wukudla okulula kokudla okulula kakhulu eChina nasemazweni amaningi emhlabeni jikelele.
Izacile, ithambile futhi inephunga elimnandi, iphakathi nendawo okubabayo
Ubhontshisi Obhontshisiwe Obusikiwe (Umucu obabayo)
ICurly Spicy Bean Curd (igama lesiShayina uLatiao), owaziwa nangokuthi umucu obabayo, inyama yenkomo yemifino gluten nokunye, wuhlobo lokudla okulula okwenziwe ngofulawa kakolweni, okunye okusanhlamvu nobhontshisi njengezinto zokusetshenziswa eziyinhloko. Muva nje kuba wukudla okulula kokudla okulula kakhulu eChina nasemazweni amaningi emhlabeni jikelele.
Okwethu Imikhiqizo ethosiwe evuthayo yenziwa ngemifino nezithelo ezintsha eziyi-100%, kugcina umbala wokuqala, ukwakheka nokunambitheka kwemifino (izithelo) ngokubukeka okuhle.
Sisebenzisa kuphela uwoyela wesundu onempilo, ogaywe kalula futhi oshuthekiwe. Futhi yonke imikhiqizo isebenzisa uwoyela kanye kuphela, ungasebenzisi futhi! I-100% yemvelo, akukho ukuthosa okujulile, akukho izithasiselo, akukho okokuvikela. Kufika kuma-95% wezakhamzimba ezilondoloziwe, amafutha aphansi, ikhalori eliphansi, izakhi zomzimba eziphezulu, ifayibha ephezulu.
I-Hawthorn ingukudla nemithi, ngokusho kombono wemithi yendabuko yamaShayina, i-hawthorn inomphumela ongcono we-appetizer, ichitha okuphakelayo, yenza kusebenze igazi, kusakaze i-stasis. Imithi yesimanje ifakazelwe ngocwaningo, i-hawthorn iqukethe i-organic acid, engakhuphula uketshezi lwe-enzyme yokugaya. Ngaphezu kwalokho, i-hawthorn inomphumela wokuthambisa imithambo yegazi. Ithandwa kakhulu ngabantu asebekhulile nezingane.Hi-awthorn lollipop ingumkhiqizo wethu osanda kuthuthukiswa wezingane nabantu abasha.
Isilinganiso sesayensi, ukulinganisela okumnandi nokumuncu, ukukhethwa ngokucophelela kwezinto, ukunambitheka okumsulwa.
Yithina kuphela esinezithasiselo zero.
Jabulela ikhwalithi, wenqabe ukubukelwa phansi.
Ama-Roll Hawthorn wangempela
I-Hawthorn ingukudla nemithi, ngokusho kombono wemithi yendabuko yamaShayina, i-hawthorn inomphumela ongcono we-appetizer, ichitha okuphakelayo, yenza kusebenze igazi, kusakaze i-stasis. Imithi yesimanje ifakazelwe ngocwaningo, i-hawthorn iqukethe i-organic acid, engakhuphula uketshezi lwe-enzyme yokugaya. Ngaphezu kwalokho, i-hawthorn inomphumela wokuthambisa imithambo yegazi. Ithandwa kakhulu ngabantu asebekhulile nezingane.Hi-awthorn roll, eyaziwa nangokuthi ikhoyili ye-hawthorn, iyizinhlobo ezivame kakhulu futhi ezithandwa kakhulu phakathi kochungechunge lwemikhiqizo ye-Haw.
Imichilo Yangempela Ye-Hawthorn
I-Hawthorn ingukudla nemithi, ngokusho kombono wemithi yendabuko yamaShayina, i-hawthorn inomphumela ongcono we-appetizer, ichitha okuphakelayo, yenza kusebenze igazi, kusakaze i-stasis. Imithi yesimanje ifakazelwe ngocwaningo, i-hawthorn iqukethe i-organic acid, engakhuphula uketshezi lwe-enzyme yokugaya. Ngaphezu kwalokho, i-hawthorn inomphumela wokuthambisa imithambo yegazi. Ithandwa kakhulu ngabantu asebekhulile nezingane.Hi-awthorn suhambo yizinhlobo ezivame kakhulu futhi ezithandwa kakhulu phakathi kochungechunge lwemikhiqizo ye-Haw.
Amakinati anongwe namantongomane anosawoti angukudla okumnandi kwendabuko okwenziwe ngamakinati. Amantongomane aqukethe uvithamini E kanye nenani elithile le-zinc, angathuthukisa inkumbulo, ukulwa nokuguga, ukubambezela ukwehla kokusebenza kobuchopho, ukuthambisa isikhumba.
Amantongomane ahlanzekile eShandong, akhiqizwa eJiaodong Peninsula.
Umhlabathi onesihlabathi wemvelo, cishe izinsuku ezingama-180 ezikhulayo.
Lokhu kwenza amakinati lapha abe makhulu, aqhakaze, amnandi futhi abe nomsoco,
Ngaleyo ndlela sibeka isimo seqiniso futhi esimnandi samakinati ethu ababayo.
Amazambane Amnandi Ethosiwe
Kusuka kuyo yonke inqubo yokukhulisa izithombo, ukutshala, ukugcina, ukucubungula nokukhiqiza, sebenzisa ngokuqinile imithetho eluhlaza yokusebenza kokukhiqizwa kokudla okuluhlaza.
Ungumnikazi wezinkulungwane zamahektare ezisekelo zokutshala, imishini ephezulu, ubuchwepheshe obuthuthukile.
Eyosiwe emazingeni okushisa angaguquki ama-4, okubhakiwe ukugeleza kwegolide kwamafutha noshukela, impumulo yemvelo yamazambane.
-38℃ ukubanda ngokushesha, ukhiye ubumnandi nokondleka, kungagcinwa isikhathi eside.
I-powder yamazambane ekhethiwe engenisiwe, ehlukile kuma-chip amazambane othosiwe, luhlobo lokudla kokungcebeleka okungathosiwe okucwengisiswe ngokubhaka. Kukhona ukunambitheka ngokuphelele kwe-15; Hlanganisa ukwakhiwa kwesikwele, okuncane nokuthandekayo, okulungele ukudliwa, kuyisinqumo esingcono kakhulu kubantu abasha abasemfashinini.
Ama-Haws aboshwe ngoShukela Enduku
Ama-Haws aboshwe ngoShukela ku-Stick abizwa nangokuthi i-Ice-sugar gourd, iBingtanghulu noma Tanghulu. Kuwukudla okulula kwamaShayina, okudabuka eSouthern Song Dynasty. Kuyintambo yezithelo zasendle ezinezinti zoqalo ezifakwe ku-maltose, eziba nzima ngokushesha uma kwenzeka umoya.
Isidlo esijwayelekile ebusika enyakatho neChina, kuvame ukwenziwa ngezinti ze-hawthorn. Iyanambitheka imuncu, imnandi futhi ibanda kakhulu lapho iqandiswe kanzima.
I-Ice-sugar gourd ine-appetizing, inhle, ithuthukisa ubuhlakani, iqeda ukukhathala, isusa ukushisa neminye imisebenzi.
I-Hawthorn Strip, Ukudla Amakinati Anosawoti, Amaphakethe Esoso Soy, Induku entsha ye-Bean Curd, Izingane Amabhisikidi, Ikhukhi leLadyfinger,